tena fitsipiky ny Mampiaraka ny vehivavy ao amin’ny tambajotra
Toy ny fitsipika, dia ny vehivavy no fihetseham-po bebe kokoa. Ary ny soratra dia tsy misy afa-tsy: izy no mampiasa bebe kokoa ny teny, epithets, fampitahana, ny sary sy ny fanoharana. Ny andinin-teny dia matetika no samy maneho hevitra mari ny be dia be ny kiaka marika sy ny matoanteny. Tsara kokoa ny zava-bita, ny zava-bita, ny zava-bita.
Inona no tianao holazaina
Ny vehivavy mandoa ny saina ho amin’ny antsipirihany, ny lehilahy dia mora mifantoka amin’ny zava-misy sy ny tsy filazana manokana.
Ny olona mahatsapa ny teniny ho toy izany. Izany hoe, raha ny virtoaly namana rehetra tsy miraharaha ny hamantatra izany sy ny hafatra eo amin’ny andalana angamba io lehilahy io. (Na angamba izy tsy marina toy izany.)
Feno habibiana lojika
Taratasy ho an’ny olona ao amin’ny aterineto no Mampiaraka amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra tsara kokoa drafitra. Ao amin’ny q a afaka mora foana ny mamantatra ny fifandraisana sy ny lojika nitsambikina avy amin’ny lohahevitra ny lohahevitra dia tsy fahita firy. Ombieny ombieny ho tonga manerana ny sasany saro-takarina, maina fandresen-dahatra («NDA, raha Paoma dia tsy ho asa vaovao, ny orinasa amin’ny hoavy dia tsy mazava toy ny taloha»). Ny olona tsy mahita vitsy ny antsipiriany nandritra ny resaka, dia mazàna ny tatitra tsy voafaritra tsara ny tsipiriany. (Fa misy vintana fa nahazo ny tanora ny vehivavy amin’ny lehilahy ny lojika. Aza malahelo.)
Jereo ny firaisana ara-nofo
Misy foto-kevitra izay mety ho ampiasaina ho toy ny fitsapana litmus. Hahazo fanahy iniana tsotsotra ny resaka momba ny tsy fitoviana amin’ny lahy sy ny vavy. Raha ny olona mamaly amin’ny maranitra ny tsy fitovian-kevitra na miondrika fiavonavonana, ianao dia azo inoana fa ny mikasika ny tovovavy. Soso-kevitra fa misy ny fomba fijery fa ny vehivavy dia tokony hikarakara ny tenany izy, ho tsara-groomed ary manifinify, na ho an’ny lehilahy izany dia tsy dia manan-danja. Ho setrin’izany dia nahare be dia be ny tombontsoa avy amin’ny ankizivavy sy mangina fanekena amin’ny olona. Fa ny fitovian-jo eo amin’ny firaisana ara-nofo, ny mifanohitra amin’izany, ny fihetseham-po bebe kokoa valiny ho hitanao ao ny lehilahy noho ny vehivavy
← Ny finday maro ny ankizivavy hatao Lahatsary Mampiaraka USA